समाचार - किन सुरक्षा दोहन आवश्यक छ?
सुरक्षा सुरक्षा किन आवश्यक छ?
एरियल वर्किंगको उच्च जोखिम छ, विशेष गरी निर्माण साइटमा, यदि अपरेटर अलि लापरवाह छ भने, तिनीहरूले खस्ने जोखिमको सामना गर्नेछन्।
सीट बेल्टको प्रयोग कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्दछ। उद्यम विकासको प्रक्रियामा, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले सीट बेल्टहरू प्रयोग गर्छन् उनीहरू नियमका पालना गर्दैनन् र गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँदछन्।
हवाई कार्य गिर पतन दुर्घटनाहरूको तथ्या analysis्कगत विश्लेषणका अनुसार झण्डै दुर्घटनाहरूको २०%5मीटरभन्दा माथि र m०%5मिटर मुनि। पहिलेका धेरैजसो घातक दुर्घटनाहरू हुन्। यो देख्न सकिन्छ कि यो उचाइबाट खस्नबाट रोक्न र व्यक्तिगत सुरक्षाात्मक उपायहरू गर्न आवश्यक छ। अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि जब मानिसहरू पतित रूपमा दुर्घटनावश अवतरण गर्दछन्, प्राय: जसो प्रायः खतरा वा प्रवण स्थानमा खस्छन्। उही समयमा, अधिकतम प्रभाव बल जुन कुनै व्यक्तिको पेट (कम्मर) ले सामना गर्न सक्छ सम्पूर्ण शरीरको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा ठूलो हुन्छ। यो सुरक्षा बेल्टको प्रयोगको लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ, जसले अपरेटरहरूलाई उच्च स्थानमा सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्षम गर्दछ, र दुर्घटना भएको खण्डमा उनीहरू प्रभावकारी ढ a्गले मानव शरीरमा हुने ठूलो क्षतिबाट बच्न सक्छन्।
यो बुझिन्छ कि औद्योगिक उत्पादनको प्रक्रियामा मानव शरीरका पतनले हुने हानीको उच्च दर छ। मानवीय गिरावट दुर्घटनाहरूको तथ्या analysis्कगत विश्लेषणले कार्यसँग सम्बन्धित दुर्घटनाहरूको १ for% योगदान गर्दछ। धेरै दुर्घटनाहरूले एयर्लि .्ग वर्किंग फलोले गर्दा हुने दुर्घटनाले हताहत हुने देखाएका छन्, जस मध्ये धेरै जसो अपरेटर्सले नियमहरु अनुसार सीट बेल्ट लगाउँदैनन। केही कामदारहरू सोच्दछन् कि उनीहरूको अपरेटिंग क्षेत्र उच्च छैन किनभने उनीहरूको कमजोर सुरक्षा जागरूकता छ। केही समयको लागि सीट बेल्ट लगाउन नसक्नु सुविधाजनक हुन्छ, जसले दुर्घटना निम्त्याउँछ।
सीट बेल्ट लगाए बिना उचाईमा काम गर्दा कस्तो नतिजा हुन्छ? निर्माण स्थलमा प्रवेश गर्दा हेलमेट लगाएको बिना कसरी भाँचेको जस्तो लाग्छ?
सुरक्षा अनुभव हल स्थापना गर्नु निर्माण साइटहरूको सुरक्षित र सभ्य निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण उपाय हो। अधिक र अधिक निर्माण इकाईहरूले निर्माण सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षा मुद्दाहरूमा शिक्षा दिन शारीरिक सुरक्षा अनुभव हल र VR सुरक्षा अनुभव हल स्थापना गरिरहेका छन्।
एक निर्माण ईन्जिनियरिंग सुरक्षा अनुभव हलले 600०० वर्ग मीटरको क्षेत्र ढाक्छ। परियोजनाले २० भन्दा बढि वस्तुहरू जस्तै हेलमेट प्रभाव र प्वालको गिरावट सामेल गर्दछ, जसले गर्दा मानिसहरू उत्पादनमा सुरक्षाको लागि सँधै डरलाग्दो आवाज निकाल्दछन्।
१.3०० ग्राम फलामको बल हेलमेटमा प्रहार गर्दै
तपाईं सुरक्षा हेलमेट लगाउन सक्नुहुन्छ र अनुभव कोठामा हिंड्न सक्नुहुन्छ। अपरेटरले एक बटन थिच्दछ र gram०० ग्रामको फलामको बल टाउकोको शीर्षमा खस्छ र सुरक्षा हेलमेटमा हिट गर्दछ। तपाईं टाउकोको शीर्षमा एक बेहोश असुविधा महसुस गर्नुहुनेछ र टोपी टेढो हुनेछ। "प्रभाव बल करिब २ किलोग्राम हो। सुरक्षाको लागि हेलमेट लिन ठीक छ। यदि तपाईले यो लगाउँदैन भने नि?" साइट सुरक्षा निर्देशकले भने कि यो अनुभवले सबैलाई चेतावनी दिन्छ कि हेलमेट लगाउनु पर्छ, तर दृढ र दृढतापूर्वक।
२. एक हातले भारी वस्तुको आसन गलत छ
अनुभव हलको एक तर्फ १० किलोग्राम, १ 15 किलोग्राम, र २० किलोग्राम तौलका "" फलामका लकहरू "छन्, र त्यहाँ" फलामको लक "मा hand ह्याण्डलहरू छन्। "धेरै व्यक्तिहरू भारी हातले समाइएको वस्तु मन पराउँछन्, जसले psoas मांसपेशीको एक पक्ष सजिलै बिगार्न सक्छ र बल प्रयोग गर्ने प्रक्रियाको क्रममा दुखाइ दिन्छ।" निर्देशकका अनुसार, जब तपाईंलाई निर्माण साइटमा बहु वस्तुहरू थाहा छैन, तपाईंले दुबै हातले लिफ्ट लिनु पर्छ र दुबै हातहरू प्रयोग गर्नुहोस् तौल क्षमता साझा गर्न, ताकि काठको मेरुदण्ड समान रूपमा तनावग्रस्त होस्। तपाईले उठाउनु भएको चीज धेरै भारी हुँदैन। क्रुर बल कम्मरमा सबैभन्दा चोट पुर्‍याउँछ। भारी चीजहरू बोक्नका लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ।
गुफाको प्रवेशद्वारबाट झर्ने डर महसुस गर्नुहोस्
निर्माणाधीन भवनहरूमा प्राय: केही "प्वालहरू" हुन्छन्। यदि फेन्स वा कफन थपिएको छैन भने, निर्माण श्रमिकहरू सजिलै तिनीहरू मा कदम र गिर सक्छ। Meters मिटर भन्दा अग्लो प्वालबाट खस्दाको अनुभव भनेको निर्माणकर्तालाई खस्ने डरको सामना गर्नु हो। सीट बेल्ट बिना उचाइमा काम गर्दै, खस्दाको नतिजा विनाशकारी हुन्छ। सीट बेल्ट अनुभव क्षेत्र मा, कुशल कार्यकर्ता सीट बेल्ट मा स्ट्रिप्स र हावा मा खींचिन्छ। नियन्त्रण प्रणालीले उसलाई "फ्रि फल" बनाउन सक्छ। हावामा वजन नहुनुको भावनाले उसलाई धेरै असहज बनाउँदछ।
साइट निर्माण वातावरणको नक्कल गरेर, सुरक्षा हलले निर्माणकर्मीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा संरक्षण उपकरणहरूको सही प्रयोगको अनुभव गर्दछ र खतरा देखा पर्दा क्षणिक भावनाहरू अनुभव गर्दछ, र अधिक सहज रूपमा निर्माण सुरक्षा र सुरक्षा उपकरणहरूको महत्त्व महसुस गर्दछ, ताकि वास्तवमा सुरक्षा जागरूकता र रोकथाम जागरूकता सुधार गर्नुहोस्। अनुभव ल्याउनु कुञ्जी मध्ये एक हो।
सीट बेल्ट अनुभव क्षेत्र को कार्य:
१. मुख्य रूपले सही लगाउने विधि र सीट बेल्टको प्रयोगको क्षेत्र प्रदर्शन गर्नुहोस्।
२. व्यक्तिगत सुरक्षा प्रकारका विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू लगाउनुहोस्, ताकि निर्माणकर्ताले २.m मिटरको उचाईमा तत्काल खस्ने भावना महसुस गर्न सक्दछ।
विशिष्टताहरू: सीट बेल्ट अनुभव हलको फ्रेम cm सेमी × cm सेमी वर्ग स्टीलको साथ वेल्डेड छ। क्रस-बीम र स्तम्भ क्रॉस-सेक्शन आयामहरू दुबै 50 सेमी × 50 सेमी हो। तिनीहरू बोल्टहरू द्वारा जडित छन्, उचाई m मीटर छ, र दुई स्तम्भहरूका बीचको बाहिरी भाग m मिटर लामो छ। (निर्माण साइट को विशेष आवश्यकता अनुसार)
सामग्री: -०-आकारको कोण इस्पात संयुक्त वेल्डिंग वा स्टील पाइप निर्माण, विज्ञापन कपडा लपेटिएको, cyl सिलिन्डर, points पोइन्ट। मानवीय कारक, वातावरणीय कारक, व्यवस्थापन कारक, र कार्य उचाइ सहित दुर्घटनाका लागि धेरै कारणहरू छन्। तपाईंले थाहा पाउनु पर्दछ कि यो २ मीटर वा त्यस भन्दा पनि उचाई मात्र हो भनेर खतरनाक छ। वास्तवमा, यदि तपाईं १ मिटर भन्दा बढीको उचाइबाट तल झर्नुहुन्छ भने पनि, जब शरीरको महत्त्वपूर्ण भागले कुनै तीखो वा कडा वस्तुलाई छुन्छ, यसले गम्भीर चोटपटक वा मृत्युको कारण पनि गर्न सक्दछ, त्यसैले निर्माण साइटमा सुरक्षा बेल्टको अनुभव आवश्यक छ। ! कल्पना गर्नुहोस्, वास्तविक निर्माण कार्य वातावरण अनुभव हल भन्दा उच्च र अधिक खतरनाक हुनुपर्दछ।
सुरक्षा उत्पादनमा, हामी देख्न सक्छौं कि सुरक्षा बेल्टहरू हवाई कामका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली ग्यारेन्टी हुन्, केवल तपाईको लागि मात्र होइन, तर तपाईका परिवारका लागि पनि। कृपया निर्माणको बेला सुरक्षा बेल्ट लगाउन नबिर्सनुहोस्।
हाम्रो अन्तिम खबर
सुरक्षा दोहन कसरी प्रयोग गर्ने
मटेरियल मूल्य बढ्छ
फोन: +86 १7070०१6264649 6।
ठेगाना: No.26, Huaicheng बुनाई पार्क, Dukangqiao रोड, Huaian जिल्ला, Huaian शहर, Jiangsu, चीन
© प्रतिलिपि अधिकार - २०२०-२०१: सबै अधिकार सुरक्षित। तातो उत्पादनहरू - साइटम्याप - एएमपी मोबाइल